Asylum-seeker, refugee, stateless person, ‘migrant’ and internally displaced person (IDP) | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeAsylum-seeker, refugee, stateless person, ‘migrant’ and internally displaced person (IDP)
Asylum-seeker, refugee, stateless person, ‘migrant’ and internally displaced person (IDP)
April 26, 2017 April 26, 2017 drkokogyi
ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူဆိုသည်မှာ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးအဖြစ် နိုင်ငံတကာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို
တောင်းခံထားသူဖြစ်ပြီး ၄င်းကို တရားဝင်ဒုက္ခသည် အဖြစ် မသတ်မှတ်ရသေးသူဖြစ်သည်။
An asylum-seeker is someone who has sought international protection asarefugee but whose claims for refugee status have not yet been determined.
ဒုက္ခသည်တစ်ဦး ဆိုသည်မှာ မိမိတိုင်းပြည်၏ ပြင်ပသို့ရောက်ရှိနေပြီး လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ လူမှုအဖွဲ့တစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှု (သို့) နိုင်ငံရေးအမြင် စသည့် အကြောင်းရင်းများကြောင့် နှိပ်ကွပ်ခံရမည်ဟု အမှန်တကယ် ခြေခြေမြစ်မြစ် စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် မပြန်နိုင်သောသူဖြစ်သည်။
A refugee is someone outside his or her own country and unable to return asaresult ofawell-founded fear of persecution on grounds of race, religion, nationality, political opinion or membership ofasocial group.
နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူ ဆိုသည်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေကျင့်သုံးမှုအရ ယင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ် မမှတ်ယူသောသူကိုဆိုလိုသည်။ အခြားနည်းဖြင့်ရှင်းပြရသော် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူ ဆိုသည်မှာမည်သည့်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မနေသောသူကို ဆိုလိုသည်။ နိုင်ငံမဲ့အနေဖြင့်မွေးဖွားလာသူများရှိသလို၊
A stateless person is someone who is not consideredanational by any State under the operation of its law. In other words,astateless person does not haveanationality of any country. Some people are born stateless, but others become stateless.
နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သောသူ များနှင့်ပတ်သက်သော ဘုံသဘောတူညီ တရားဝင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသော ဝေါဟာရမရှိပါ။ သို့သော်လည်း ဥပမာအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရှာရန် (သို့) ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများရှာရန်မိမိ၏ဆန္ဒအလျောက်
A uniform legal definition of the term ‘migrant’ does not exist at the international level. However, migrants are often understood to mean someone who has chosen to move voluntarily, for example in order to find work or pursue educational opportunities.
နေရပ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဆိုသည်မှာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၊ အထွေထွေအကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေများ၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ (သို့) သဘာဝဘေးအန္တရာယ် (သို့) လူကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသောဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ၄င်းတို့၏နေအိမ်များ သို့မဟုတ် အစဉ်အလာအရ အမြဲနေထိုင်သည့်နေရာများကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုမဖြတ်ကျော်ဘဲ မိမိ၏နိုင်ငံတွင်း အတင်းအကြပ်သို့မဟုတ် မလွှဲမရှောင်သာပဲ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးရသူများဖြစ်သည်။
An internally displaced person (IDP) is someone who has been forced to flee their home or place of habitual residence asaresult of armed conflict, generalized violence, violations of human rights, or natural or human-made disasters, but who have not crossed an internationally recognized border.
← ပြည်ပက အလှုရှင်တွေကို သူတို့ လိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေးပြီး အလှူ ငွေ တွေ လှူ ခိုင်း တယ်။ ပြီးတော့ တ၀က်လောက်ဘဲ သုံးတယ်။ ကျန်တဲ့ တ ၀က်လောက်က အိတ်ကပ်ထဲရောက်သွားပါတယ်
လွင်ပြင်ရဲ့မရိုးမသားလုပ်ရပ်နဲ့ ၀ါဒဖြန့် ခရစ်ယာန်မီဒီယာ →